Burcad-badeed Soomaali ah oo siidaayey markab laga leeyahay dalka Gariigga oo muddo todobo bilood ah ay haysteen. – Radio Daljir
Burcad-badeed Soomaali ah oo siidaayey markab laga leeyahay dalka Gariigga oo muddo todobo bilood ah ay haysteen.
Raasu-binna, Oct 01 – Siidaynta Markabka ayaa ka dambeysay kadib markii burcadbadeeda lasiiyay lacag madaxfurasho oo gaaraysa sadex milyan iyo bar doolarka Mareykanka oo ay burcadbadeedu dalbadeen sida uu sheegay mid ka mid ah burcad-badeeda oo la hadlay Reuters.
“Waxaa nasoo gaaray sadex milyan iyo bar lacag madaxfurasho ah,markabkana waan ka dagnay” ayuu yiri nin magaciisa kusoo koobay Xusen oo ka mid ah burcadbadeeda oo isagoo ku sugan xeebta tuulada Raas-bina ee gobolka Bari qadka taleefanka kula hadlay wakaaladda wararka ee Reuters.
Tifaftiraha warbixinta badaha Soomaliya islamarkaana horay u ahaa sarkaal katirsan gudgiga la-socodka gaadiid badeedka gobolka Andrew Mwangura, ayaa xaqiijiyay siidaynta marakabka waxaana uu sheegay inuusan ka warhayn xaaladda caafimaad ee shaqaalaha markabka la socday oo tiradoodu lagu sheegay 23 shaqaale ah.
Markabkan la siidaayay oo lagu magacaabo MV Dover ayaa waxaa uu ku gooshayey calanka dalka Panama, waxaana burcad-badeeda ay afduubteen bishii February ee lasoo dhaafay xilli uu marayay meel 260 nautical miles kaga beegan xeebaha waqooyi bari ee magaalada Salalah ee dalka Cumman.